Sleep – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ခြင်း၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတွေအတွက် အိပ်စက်တာက အရေးပါတဲ့ အားသွင်းမှုဖြစ်တယ်။ သင်အိပ်တဲ့ အနေအထားက သင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်မှုရှိတယ် ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ လတ်တလောလေ့လာမှုအရ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တာကြောင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအများစုရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ –...
ညတိုင်း အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်စေမည့် နည်းဗျူဟာ
မီမိုး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) ညတိုင်းအိပ်ရေး၀၀ အိပ်မောကျပြီး မနက်တိုင်း လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထလာစေမယ့် နည်းဗျူဟာရှိပါတယ်။ အဲဒါက ” ၁၀-၃-၂-၁-၀ “ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းဗျူဟာက သင့်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ အနားရပြီး စွမ်းအင်အပြည့်ရှိနေအောင် ကူညီပေးမှာပါ။...
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားလူငယ် (၂) အိပ်ရေးမ၀သည့် ကျောင်းသား
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) အခုဆောင်းပါးမှာ အိပ်ရေးမ၀တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ လက္ခဏာတွေ၊ အိပ်ရေးမ၀ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမ၀သည့် ကျောင်းသားလူငယ်များတွင် တွေ့ရှိရသော လက္ခဏာများ (က) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ကျောင်းသားလူငယ်အရွယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ အိပ်ချိန်ထက်...
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားလူငယ် (၁)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေမှာ သဘာဝအလျောက် တောင့်တလာတဲ့ ဆန္ဒသုံးမျိုးကို “အိပ်၊ စား၊ ကာမ”လို့သိထားကြပါတယ်။ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့အတွက် လိင်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားသန်မာဖို့၊ လှုပ်ရှားသွားလာဖို့ အစားအစာလိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းတွေ ရေရှည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားယူဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
အိပ်စက်ခြင်းက အမျိုးသမီးများ ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးစေ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ညမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်စက်တာက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပြီး တစ်မှေးအိပ်စက်တာက အမျိုးသားတွေအတွက် အကျိုးရှိစေတယ်လို့ လေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ်မက်စ်ပလက်အင်စတီကျုမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အိပ်စက်တာနဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည် ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲဆိုတာကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၆၀ဦးရဲ့ အိပ်စက်မှုပုံစံတွေကြည့်ကာ လေ့လာစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။...
ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေး အိပ်ချိန်မှန်စေဖို့
ဇွန်ခိုင်ဦး ( ဆေးဝါးတကက္ကသိုလ် ) သင့်ကလေး ကျောင်းတက်တဲ့ ရက်တွေမှာ အိပ်ချိန်၊ နိုးချိန်မှန်ပြီး ကျောင်းမှာတက်ကြွတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကောင်းဖြစ်လာအောင် လေ့ကျင့်ပံ့ပိုးပေးရပါမယ်။ (၁) အိပ်ချိန်မှန်အောင် ကြိုတင်ကျင့်ပေးပါ ကလေးတွေဟာ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်ရတဲ့အခါ ကျောင်းတက်စဉ်ကလို အိပ်ရာဝင်တာ၊ အိပ်ရာထတာ ပုံမှန်...
ညအိပ်မပျော်ဘဲ မိုးလင်းမှ အိပ်ပျော်နေလို့ . . .
မေး. ညီမနာမည်က ဆုမြတ်နိုးပါ။ ညီမအသက်က ၁၉ နှစ်ပါရှင့်။ ညီမညဘက်တွေ အိပ်မပျော်လို့။ ညတိုင်း ၂ နာရီ-၃နာရီလောက်ပဲ အိပ်ပျော်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး ဘယ်လိုပဲ အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားကြိုးစား မနက်မိုးလင်းမှအိပ်ပျော်တယ်ရှင့်။ ညီမ ညဘက်တွေအိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုတွေ ပြုမူနေထိုင်သင့်သလဲနဲ့ ဘာဆေးများသောက်ရမလဲ...
ည ည အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်လိုလျှင်…
၊ လရိပ်မေ ၊ ည ည နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ချင်ရင် အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာရပါမယ်။ – ခြေထောက်အေးကြီးနဲ့ အိပ်ရာမ၀င်သင့်ပါ ခြေထောက်အေးကြီးနဲ့ ဘယ်တော့မှ အိပ်ရာ မ၀င်ပါနဲ့။ ခြေထောက်နွေးအောင် ခြေအိတ်ဝတ်ပြီး အိပ်သင့်ပါတယ်။ – ခါးနာနေရင်...
အိပ်သည့်အခါ သွားရည် (အာပုပ်ရည်) ကျရသည်မှာ ရောဂါမဟုတ်ပါ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ညအိပ်ရာမ၀င်မီသွားတိုက်ပြီး အိပ်သော်လည်း အချို့လူများ သွားရည်(အာပုပ်ရည်)ကျရသည်မှာ ရောဂါမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်သာဖြစ်ကြောင်း မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကို မောင်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ တချို့လူတွေက မေးကြတယ် ....
သမ်းဝေတဲ့အကြောင်း တွေးလိုက်ရုံနဲ့တောင် သမ်းဝေတာက ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ အခု သမ်းဝေတဲ့အကြောင်း စာဖတ်ပြီးတာနဲ့ သင့်မှာ သမ်းဝေနိုင်ခြေ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။